Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Avrily, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Avrily, 2019
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Avrily, 2019
Lalàna 140: Fitsikilovana an'i Libanona
Libanona 30 Avrily 2019
Manome antoka ny zo hanana tsiambaratelo amin'ny fampiasàna ireo fitaovana fifandraisana elektronika rehetra ny lalàna Libaney -- indrisy, matetika mandika izany lalàna izany ireo manampahefana.
Libanona: Akademia, Fambolena ary Asa Fanorenana
Akademia, Fambolena ary Asa Fanorenana, samy resahana ato anatin'ny lahatsoratra daholo ny amin'ireo lohahevitra ireo. Arahan'ny fenhoankevitra miharo fanantenana sy ahiahy
Palestina: Gaza eo ambany fahirano
Ejipta 30 Avrily 2019
Manampy ny feon'izy ireo ao anatin'ny tabataba iraisam-pirenena ny bilaogera manerana ny faritra satria tafiditra ao anaty haizina i Gaza. Nitarika fanakatonana ny tobin' herinaratra tokana ao amin'ny farittra noho ny tsy fisian'ny solintany ny fahirana efatr'andro nataon'i Israely.
Tonizia: Aiza ny fandevenam-panjakana?
Israely 30 Avrily 2019
Toniziana valo no anisan'ireo vatana mangatsiaka 197 natolotr'i Israely tany Libanona, nandritra ny fifanakalozana gadra farany teo amin'ny firenena roa tonta. Mitaky ny fiverenan'ireo sisa tavela ho any amin'ny fireneny ireo bilaogera Toniziana - ary manome voninahitra ny maty amin'ny fandevenana ataon' ny fanjakana.
Syria: Fitanjahana sy ny fahasimban'ny fitondrantena
Syria 30 Avrily 2019
Fitanjahana firy amin'ny fahitalavitra no azo raisina ho toy ny zavakanto, ary firy amin'izany no mandray anjara amin'ny famotehana ny fitondrantena? Miezaka mamaly ity fanontaniana ity ilay bilaogera Syriana Emad [Ar]:
Ireo Libiana Blaogera Tao anatin'ny Herinandro
Libia 29 Avrily 2019
Somary nahaliana iny herinandro lasa iny raha toa ka niresaka mikasika ireo fahamendrehana mifandraika amin'ny zava-misy virtoaly sy ny tontolo miafina, na momba ny vintana amin'ny Second Life (Fiainana Faharoa) izay afaka hidiranao foana na rahoviana na rahoviana raha toa ka leo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao ianao.
Ao amin'ny Saikinosin'i Sinai ao Ejipta, Tsy Mitsahatra Ireo Fahatapahan'ny Aterineto
Ejipta 29 Avrily 2019
Satria nahatonga ireo mponina maro ho tsy tafiditra amin'ny Aterineto sy ny tolotra an-tariby intsony ny fampidirana ny Avaratr'i Sinai ambany fitantanan'ny tafika, miara-miasa ny mponina sasany mba hanenjehana eny amin'ny fitsaràna ireo mpamatsy tolotra an-tariby ary mangataka fiantohana tolotra.
Ejipta: Ho avy tsy ho ela ny rindrina aroafon'i Shina
Eo amin'ny kitendry ny ilan-tanan'ireo bilaogera Ejiptiana ary eo amin'ny fony ny ilan-tanana iray hafa. Taorian'ny famoretana vao haingana teo amin'ireo bilaogera sy mpikatroka an-tserasera taorian'ny fitroarana 6 Aprily, milaza mihitsy ny sasany fa mbola ho avy ny ratsy indrindra.
Iran: 20 taona an-tranomaizina, sazy tsy mbola fahita hatrizay ho an'ny bilaogera
Iràna 29 Avrily 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Manolotra fotoana fohy ho fakana aina ny fanoratana momba ireo bilaogera Iraniana. Tsy misy fiafaràny ny tantara mampalahelo ary toa tsy mihena ny fandrahonana. Toy ny hoe tsy ampy ny famoretana sy ny sivana, fa toa miseho ihany koa ny...
Arabia Saodita: Ny Hijab sy i Frantsa
Arabia Saodita 28 Avrily 2019
Tamin'ny taona 2004, noraràn'i i Frantsa ireo mpianatra ao amin'ny sekoliny mba tsy hanao fitafiana hanehoana marika ara-pivavahana sy fitafiana maneho maha-mpikambana amin'ny fivavahana - anisan'izany ny fehiloha Silamo na ny Hijab ho an'ny vehivavy. Manohitra ny fitsipika ankehitriny ireo vehivavy Saodiana - efa-taona aty aoriana, hoy ireo bilaogera.